Ezemidlalo nokuPhepha, Ibhola
Umdlali webhola laseRussia u-Arseny Logashov, owake wabhekwa njengomunye wabavikeli abathembisayo kakhulu, akazange avele ensimini isikhathi eside njengengxenye yeLokomotiv yaseMoscow. Ukuntuleka kwemidlalo yokudlala akufani nomdlali osemusha ohlela ukuthola ithimba elisha kakade ngesikhathi sekhefu lokubanjelwa ebusika.
Ukufika ku "Khimki"
U-Arseny Logashov waqala ukuthatha izinyathelo zokuqala zebhola lezemidlalo eneminyaka engama-6 ubudala, efunda emaceleni ezemidlalo ezikoleni zasemakhaya eKursk. Phakathi nenkathi yokuthuthukiswa komdlali omncintiswano omncane, ochwepheshe abaningi baphawula ithalenta elimangalisayo lomdlali, futhi eneminyaka engu-16 umdlali webhola lezinyawo wanquma ukuzama ukunqoba uMoscow, lapho adlala khona isakhiwo se-Academica. Ngemuva kweminyaka embalwa eqenjini laseMoscow, uLogashov wakwazi ukuzibonakalisa futhi wakhathalela amaqembu amaningi aqeqeshiwe, kuhlanganise nesifunda saseMoscow "Khimki", esasayina isivumelwano naye ngoJanuwari 2009.
Ukusuka eMoscow kuya eMakhachkala
U-Arseny Logashov uqale umdlalo weqembu elisha le "Himchan" kanti ehlobo kuphela waqala ukungena emdlalweni weqembu le-Premier League. Ukuqala komdlali osemncane kulo mqhudelwano oyinhloko kazwelonke kwenzeka ngoSeptemba 18 wonyaka ofanayo: lo mdlali washintsha esikhundleni samaminithi ambalwa emdlalweni olahlekelwe uKhimki ngokumelene noSpartak Nalchik. Ngokushesha ngemva kwalokho, umqeqeshi omusha weqembu ufike eqenjini, eliphethe uMogashov ukuqeda lesi sizini phansi, ekhulula isidlali izikhathi ezingu-5 ensimini.
Kodwa-ke, izintambo zokuhluleka eziseduze neqembu laseMoscow zithumela "iKhimki" ku-First Division, lapho ngaphansi kobuholi buka-Alexander Tarkhanov nabalandeli bakhe u-Arseny wadlala ngendlela entsha. Esikhathini sakhe sesibili sokuba iqembu lokuqala lochwepheshe emsebenzini wakhe, iRussia ibonakale izikhathi ezingu-20 ensimini, ngemuva kwalokho yaqinisa impumelelo yayo ngokuvela emihlanganweni engu-17 ekuqhubeni u-2010/2011. Ngenxa yalokho, ithalenta lomlindi wesitokisi ulinganise uMakhachkala "Anji", owathola uLogashov, ngokushesha wamthumela ukuba aqashe eVoronezh "Isibani".
Ngemuva kokudlala izinyanga eziyisithupha ku-FNL, u-Arseny Logashov ubuyele ku-Anzhi njengomdlali wangempela futhi washeshe wathola enhliziyweni yeqembu. Njengengxenye yokwakhiwa kweqembu leMakhachkala, ukuqala kuka-defender kwenzeka ngoMashi 2012. Emdlalweni we-Russia ngokumelene nenhloko-dolobha "u-Spartacus" u-Arseny wadlala wonke amaminithi angu-90.
Ngaphansi kokuhola kukaGuus Hiddink, owathembele kumdlali, u-Arseny Logashov waba isidlali esibalulekile, wayevele evele ensimini kokubili ku-Premier League nase-European League. Okuhlangenwe nakho okukhulu kwalokhu kuvikela, kuhlanganise nomhlaba wonke, kwakwandisa kakhulu ukubaluleka kwalo emakethe yokudlulisa, futhi kwandisa uhlu lwamathimba ayenesithakazelo kuye. Futhi ehlobo lika-2013, ngenxa yenguquko ekuthuthukiseni u-Anji, Logashov ngokushesha wathola ithimba elisha.
Iqembu elisha lika-Arseny lalinguLokomotiv waseMoscow, okwathi ngokushesha wathumela umdlali ukuba aqashe iminyaka yonke eRostov. URostov, u-Logashov wasebenzisa ingxenye ephumelelayo emdlalweni wakhe, njengoba ekhishwe umgomo wakhe wokuqala ku-Premier League, ebhala emasangweni "we-Ural", futhi ebona iphasika elikhiqizayo, ngenxa yokuthi iqembu leRostov lithatha umdwebo ovela ku-former defender "Anji". Ngonyaka nje u-Arseny usebenzise imidlalo engu-26 e-T-shirt yaseRostov, kodwa ekupheleni komhlangano noTomyu, ummeli walimaza, wabuyela eLokomotiv.
Umzabalazo wendawo ngesisekelo se-"Locomotive"
Eqembu lakhe elisemthethweni, u-Arseny Logashov, obalimala kakhulu kakhulu (kuthatha okungaphezu konyaka ukuba umdlali abuyele), wadlala kuphela ekuqaleni kuka-2015. Ngemva kokuthayipha ifomu elihle, iRashiya inqobe indawo ngesisekelo futhi yaqhuba imihlangano engu-10 ngenkathi 2014/2015.
Kodwa-ke, ekuqhudelwaneni okulandelayo isikhathi esiningi iMogashov esichitha ebhentshini. Ukufika ngo-2016 njengomqeqeshi oyinhloko we-odumile u-Yuri Semin akazange ashintshe isikhundla somdlali, okwenze kube nzima kakhulu. Ngenxa yalokho, ngenkathi 2016/2017 Arseny akakaze avele ensimini. Ngesikhathi sekhefu sasebusika, washiya ngeqembu, ecabanga ngokujulile ngokufuna ithimba elisha, ehlala ekamu lokuqeqesha neqembu elisha laseLokomotiv.
I-Euro 1992 ebhola: imiphumela
UGevorg Ghazaryan: umsebenzi we-striker wase-Armenia
UDmitry Kuznetsov ungumdlali onethalente nomqeqeshi othembisayo. Yonke into ejabulisayo mayelana nomdlali wangaphambili weSoviet
U-Yegor Filipenko ungumvikeli omuhle kakhulu waseBelarus
Umsebenzi inkolelo-mbono yokuziphendukela okungenzeka nge isinqumo. Okungenzeka Theory ngoba Dummies
Inkanyezi eziyisishiyagalombili enamaphoyinti: Inani. Inkanyezi eziyisishiyagalombili enamaphoyinti e-Orthodox
"Indlu ibhizinisi ikilasi" - ukudlala, okuyinto libuyekeza kubangele isifiso sokuphinde babone ke
Yellow ulimi enamathela: izimbangela kanye nokwelashwa
Abashisekeli abangcwele yethu: Lapho igama ngosuku Daria?
Yini umbala uya blue? Inhlanganisela yimpumelelo kakhulu
Inkantolo inhlawulo. Civil Inqubo Ikhodi WaseRussia